Amanqaku kaPauline Farris Martech Zone |
Amanqaku ngu UPauline Farris
UPauline uthetha isiPhuthukezi, isiNgesi, iSpanish nesiTaliyane. Wayehamba ilizwe lonke ukuze azntywilisele kwiinkcubeko ezintsha kwaye afunde iilwimi. Namhlanje unebhongo ngokuba lilungu lokuvota leAmerican Translators Association kunye nokuthatha inxaxheba kwiBhunga lobuNkokheli kwiCandelo loLwimi lwesiPhuthukezi.
Ukwenza uLuhlu lweePosi kuThengiso lwe-imeyile
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 13, 2019 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 13, 2019 UPauline Farris
Alithandabuzeki elokuba ukuthengisa nge-imeyile kunokuba yenye yezona ndlela zisebenzayo zokufikelela kubathengi abanokubakho. Ine-ROI ephakathi yeepesenti ezingama-3800. Akuthandabuzeki ukuba le ndlela yentengiso inemiceli mngeni yayo. Amashishini kufuneka aqale atsale ababhalisile abanethuba lokuguqula. Ke, kukho umsebenzi wokwahlulahlula kunye nokulungelelanisa uluhlu lwababhalisi. Okokugqibela, ukuze wenze loo migudu ibaluleke, makwenziwe amaphulo e-imeyile